Home Wararka Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dalka K/Afrika
Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dalka K/Afrika
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Mowliid Xuseen Gacal, ayaa ALLAHA u Naxariistee burcad hubeeysan waxa ay ku dileen Tuulada Phillipi oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Dalka Koonfur Afrika.
Marxuumka, ayaa markii la dilayey oo aheyd Gabal-dhicii arbacada waxa uu watay Gaari uu adeeg ku siday, wadada oo ciriiri aheyd awgeedna Tuugada toogatay, ayaa goobta ka baxsaday kahor intaysan Booliska soo gaarin goobta.
Howlgal lagu baadi goobaya raga hubeeysan ee dilka geeystay ayey durba booliska bilaabeen iyago ku raad jooga dableeydii toogashada u geeystay muwaadinka soomaaliyeed.
Dhanka kale muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray saacid Maxamed Xasan ayaa geeriyooday kadib markii Gaarigii uu waday uu Buundo kala dhacay wada ka timaadda Fish Hoek oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Dalka Koonfur Afrika.
Marxuumka ayaa kamid ahaa dhalinyarada Daraawalada ka ah gaawrida Uber Taxi
Previous articleAxmad Karaash oo xilka ka qaaday wasiiradii Deni ku adeegan jiray
Next article(DEG DEG) Maalinta la dooranayo madaxweynaha cusub oo la shaaciyey
Deg Deg – Qarax xoogan oo ka dhacay Magaladda Muqadisho
(Akhriso) 5 Qodob ay la tageen Jubbaland & Puntland shirka wadatashiga...